March 21, 2022	Off	By roma
Counter-Strike dia mpitazana voalohany miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fiaraha-miasa sy ny tanjona. Mifanandrina amin'ny ady ny mpampihorohoro sy ny Counter-Terrorist.
Safidy lalao mifaninana dia ahitana:
Fanavotana na fiarovana takalon'aina.
Mamboly na manala baomba.
Mahazo toerana hambolena baomba.
Omena ny mpilalao vola amin'ny lalao handany fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa mifototra amin'ny zava-bitany amin'ny faran'ny fihodinana tsirairay.
Half-Life mod Counter-Strike navoaka voalohany tamin'ny 1999. Hatramin'ny namoahan'ny beta voalohany azy, Counter-Strike dia namolavola toby mpankafy natokana milalao ny lalao ara-pivavahana nandritra ny folo taona mahery.
Avy amin'ny 1.6 mankany amin'ny loharano mankany amin'ny fanafihana manerantany, Counter-Strike natao ho fenitry ny fandrefesana ny fahaizan'ny mpilalao iray. Amin'ny fifaninanana manerana an'izao tontolo izao, ny ekipa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia mampiseho ny fahaizany sy ny paikady. Professional Counter-Strike mpilalao lasa anarana ao amin'ny vondrom-piarahamonina lalao iraisam-pirenena.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny tantaran'ny tsirairay isika Counter-Strike Lalao!
Counter-Strike: Fanafihana manerantany
Tamin'ny taona 2012, namoaka lalao vaovao ihany i Valve: Counter-Strike: Fanafihana manerantany, izay lasa iray amin'ireo lalao video malaza indrindra. Ity version of Counter-Strike: Navoaka niaraka tamin'ny maotera vaovao ny Global Offensive izay namorona indray ny lalao ary nampihatra ny lalao. Tsy mahagaga raha mahasarika mpilalao 11 tapitrisa eo ho eo isam-bolana izy io, mandray anjara amin'ny fifaninanana sy hetsika tohanan'i Valve.
Fomba filalaovana ho an'ny Mpampihorohoro sy Counter-Terrorist Misoroka ny fanafihan'ny mpampihorohoro na ny famonjena babo no tena manjaka. Misy karazana lalao sivy, anisan'izany ny battle royale sy ny fomba fifaninanana.
Matchmaking mamela ny mpilalao hilalao amin'ny mpizara manohitra ny hosoka. Milalao amin'ny sarintany nataon'ny mpampiasa. Matetika ny bots no manolo ny mpiara-miasa sy ny fahavalo. Ny hoditry ny mpampiasa dia miseho ao anaty boaty harena, miaraka amin'ireo mpamorona mandray fanapahan-kevitra. Toe-karena filokana sy filokana no niforona tao anaty lalao. Global Offensive dia famelezana goavana ho an'ny Valve (raha tsy ny malaza indrindra).
Fampandrosoana: Hidden Path Ent. & Valve
Lalao kely indrindra fepetra:
CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 na AMD Phenom™ X3 8750 processeur na tsara kokoa
KARATSY VIDEO: Ny karatra video dia tsy maintsy 256 MB na mihoatra ary tokony DirectX 9 mifanaraka amin'ny fanohanana ny Pixel Shader 3.0
SPACE FREE DISK: 15 GB
VIDEO RAM: DEDICATED: 256 MB
Fepetra fanolorana lalao:
Rehefa Counter-Strike 1.6 navoaka tamin'ny 2004, io no fanovana anarana farany ho an'ny Counter-Strike fanavaozana ny anarana. Ny tsy fantatry ny ankamaroan’ny olona anefa dia izao CS 1.6 tena tsy mitovy amin'ny famoahana tany am-boalohany!
Afaka manampy koa ny mpilalao CT Shield (fiaro korontana) amin'ity vanim-potoana ity. Nomena loko vaovao avokoa ny Aztec, Airstrip, ary Inferno. Faly ireo mpilalao amin'ny karazana sekoly tranainy nahita a maody malalaka nahafinaritra kokoa ny lalao!
Ny frags vaovao amin'ny fanafoanana / fanapoahana baomba (C4) in CS 1.6 Tsy mitovy amin'ny dikan-beta tany am-boalohany, ary ity ampahany ity dia nahafinaritra ho an'ny ankamaroan'ny mpilalao (anisan'izany izaho!)
tany am-boalohany Counter-Strike novolavolaina sy nohatsaraina ihany koa tamin'ny fampiasana ny motera loharano vaovao. Vokatr'izany, mpilalao maro no tsy nivadika tamin'ny dikan-teny 1.6 an'ny lalao, noho izany dia tsy afaka mifindra any amin'ny vaovao izahay. Counter-Strike: Loharano.
Fampandrosoana: Valve Corporation, Turtle Rock Studios. Rehefa namoaka "CS 1.6"havaozina ho dikan-teny beta tamin'ny 16 Janoary 2003, nantsoiny hoe "CS 1.6 Beta.”
Fepetra kely indrindra amin'ny lalao:
CPU: Intel Pentium 4 processeur (3.0 GHz, na tsara kokoa)
KARAKA VIDEO: Karatra sary amin'ny DirectX 8.1
KARAZANA SOUND: Ie
SPACE FREE DISK: 4.6 GB
VIDEO RAM: DEDICATED: 64 MB
CPU: Pentium 4 processeur (3.0 GHz, na tsara kokoa)
KARAKA VIDEO: Karatra sary amin'ny DirectX 9
VIDEO RAM: DEDICATED: 128 MB
Ny 1 Novambra 2004 no nanamarika ny famoahana ny Counter-Strike: Loharano, fanavaozana ara-teknolojia lehibe, ary famelombelomana ho an'ny Counter-Strike franchise. Vokatry ny fahasamihafan'ny fahasamihafana misy eo amin'ireo iterations roa Counter-Strike, mpilalao maro no manohy misafidy ny famoahana Steam tany am-boalohany. Ireo dikan-teny roa ireo dia mbola misy ankehitriny.
Ny famenoana sari-tany no atao. Ny tanjona dia ny handresy ny ekipa hafa amin'ny fihodinana. Mampihena ny fahitsiana ny hetsika, ary miteraka fihemorana lehibe ny tifitra amin'ny totozy. Satria ny reticle an'ny mpilalao dia tsy maneho ny tena fiantraikan'ny bala, ny vao manomboka dia mety mikendry avo loatra. Ny bala midona amin’ny lohany no tena mahafaty.
Niova ny fihetsiky ny fitaovam-piadiana sy ny grenady. grenady setroka miparitaka miadana kokoa noho ny an'ny Counter-Strike, ary hafa ny fandefasan'ny flashbangs. In Counter-Strike: Loharanom-baovao, ny kabinetran'ny firaketana dia mifampiresaka. Counter-Strike: Tsy dia mazava loatra ny fiavian'ny loharano. Manampy ny fizika ragdoll ny loharano.
Fampandrosoana: Valve Corporation; Turtle Rock
Na eo aza ny fetrany, Condition Zero sy Source dia nanakiana mba hahazoana antoka fa manana ny fampahalalana rehetra ilainy i Valve alohan'ny hamoahana ilay mpitifitra an-tserasera marobe, Counter-Strike: Global Offensive, tamin'ny 2012. Tsy mahagaga raha mijanona ho iray amin'ireo lohateny malaza indrindra amin'ny Steam ny Global Offensive.
Na dia efa antitra aza izy, ny Global Offensive mbola manana be dia be hatolotra ny mpilalao amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny fahaiza-manao. Ny loka tsara indrindra amin'ny taona 2017 an'ny IGN, ny loka Golden Joystick, ary ny loka lalao 2017 dia voatendry ho azy avokoa tamin'ny taona 2017. Akademia nasionaly ny mpanadina lalao video koa dia napetraka ho azy tamin'ny 2017. Mety amin'ny dikan-teny nivoaka enin-taona lasa izay.
Lalao malaza sy fanta-daza izay namboarina ho an'ny fifaninanana eSports ary mijanona ho ankafizin'ny mpankafy sy ny mpijery. Noho izany dia mety ho an'ny World of Duels izy io. –
Navoaka ny Valve sy Sierra Entertainment Counter-Strike: Condition Zero dia mpitifitra olona voalohany.
TagsAbout MediaWiki counter strike counter strike 1.6 Download counter strike Download counter strike Malagasy Bible counter strike dikan counter strike lisitry ny versions Counter-Strike: Condition Zero Counter-Strike: Fanafihana manerantany Counter-Strike: Loharano cs cs 1.6 Download Development Lalao kely indrindra Recommended lalao Gameplay tantara mpilalao fepetra fitokonana dikan
Counter-Strike 1.6 Kolontsaina Crosshair
Download Counter-Strike 1.6 maimaim-poana amin'ny PC